anyị na-apụghị nyefee kpọmkwem site na ekwentị flash mbanye n'ihi IPhone anaghị akwado na njikọ na USD disk, ma ị na-achọ ka ezitere gị flash dị ka azụ n'ihu na ị nweta nkwalite gị sistemụ, ịkọrọ gị foto na ndị ị hụrụ n'anya, ma ọ bụ na ị dị nnọọ chọrọ onwe elu gị ohere, e nwere mfe ụzọ na-achọ ole na ole nzọụkwụ ina ọrụ ahụ. nke bụ; Ị nwere ike ma transfer gị na kọmputa mbụ ahụ gị flash mbanye ma ọ bụ i nwere ike nyefee gị flash mbanye ọtọ.
Part 1: Free Way nyefee Photo Library si iPhone ka Computer
Part 2: Nyefee Photo Library si iPhone na kọmputa na TunesGo Ochie
Part 1: Free Way nyefee Photo Library si iPhone na kọmputa na iji email
N'ihi ya, na-idetuo Photo Library si iPhone ka PC, ị nwere ike ịchọ ụzọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere nke a, ị na-nri ebe. Ebe a bụ ike iPhone na kọmputa transfer ngwá ọrụ na-enyere gị aka imezu ọrụ mfe. Ọ bụ Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac).
Nkebi nke 2: Nyefee Photo Library si iPhone na kọmputa na TunesGo Ochie
TuneGo Ochie, idetuo photos, music, listi ọkpụkpọ, videos si iPod, iPhone & iPad ka iTunes na gị PC maka ndabere. TuneGo Ochie na kachasị na-dakọtara na IPhone 3GS, IPhone 4, IPhone 4S, IPhone 5, IPhone 5c, IPhone 5S, IPhone 6 Plus na IPhone 6, ọ bụrụhaala na ha na-agba IOS 5, 6, 7, 8.
Nyefee Photo Library si iPhone ka PC mfe.
Dọrọ na dobe iPhone Igwefoto Roll ka PC.
Detuo foto site na kọmputa na-Photo Library iPhone enweghị wepụ ọ bụla ẹdude foto na iPhone.
Hichapụ achọghị foto na Photo Library na batches.
Full dakọtara na iPhone 5S / 5C / 5 / 3GS / 4 / 4G na-agba ọsọ iOS 5/6/7.
Rịba ama: Gaa na Mac version - Wondershare TunesGo (Mac)
Jikọọ iPhone na ẹkedori TunesGo Ochie
Launch software na ị dị nnọọ arụnyere. Iji USB na bịara na iPhone, jikọọ ekwentị gị na Photo Library na ị chọrọ nyefee gị na kọmputa. Wondershare Ga-enwe ike ịchọpụta na ekwentị gị mgbe ị na-jikotara ya na kọmputa gị.
họrọ photos na ị chọrọ nyefee gị na kọmputa
Na isi window, n'aka ekpe gị, pịa 'Photos' taabụ na-egosi foto window. Mgbe ahụ, chọọ iPhone Photo Library ma pịa 'Export ka'. Nke a kwesịrị ime ka a obere nchọgharị window na-egosi ebe ị na-azọrọ na ịhọrọ a zọpụta ụzọ na-Library Photos na kọmputa gị. Nke a ga-nchekwa ebe ị ga-ahụ bufee foto gị Photo Library.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị zọpụta ụfọdụ nke foto gị Photo Library nchekwa, ma ọ bụghị ha niile, na-ahọrọ na-emeghe gị Photo Library si Wondershare TunesGo isi window, họrọ photos na ị chọrọ nyefee ma pịa 'Export ka', nke ga- ime na software izipụ foto ọ bụla ọnọdụ ị na-ahọrọ.
Alternatively, i nwere ike dị ịdọrọ photos na ị chọrọ nyefee gị na kọmputa na nchekwa na ị chọrọ iji chekwaa ma ọ bụ chekwaa na.
Usoro kwesịrị ejikari na-sekọnd ole na ole bụ ezie na ọ ga-adabere na ọnụ ọgụgụ nke photos na ị chọrọ nyefee gị na kọmputa site gị iPhone.
Ezie na ntuziaka usoro eji gị email site Part 1 ga-esiri gị ike na-ezipụ foto na batches nke ise ọ bụla, Wondershare TunesGo-enye gị ohere iji aka usoro na obere oge ma na-eso mfe nzọụkwụ na ike ga-esochi onye ọ bụla, ọbụna na-enweghị miri nka na IT . Ọzọkwa, akwụkwọ ntuziaka ụzọ site na gị email ga achọ ka nwere ihe njikọ Ịntanetị mgbe Wondershare TunesGo ga-eme ọrụ ahụ na ukwu mfe iso ụzọ na-enweghị mkpa maka na njikọ Ịntanetị.
Wondershare TunesGo aghọwo a top iTunes enyi na-eweta ala ka management nke a ọtụtụ ihe na gị Apple ngwaọrụ.
E wezụga na-ebufe foto site na iPhone ka Computer. Ngwa-enye ohere ọrụ nyefee music na foto faịlụ site na iPhone ma ọ bụ iPad Flash mbanye, music faịlụ site na iPod na kọmputa, ọ pụrụ ọbụna tọghata music faịlụ formats na-ezite ha ogologo iTunes ikwe gị mgbe ahụ mmekọrịta gị iPhone ma ọ bụ iPad.
Ọzọkwa , ị nwere ike ihichapụ photos etolite gị iPad ma ọ bụ iPhone, ọ ga-abụ na e nwere na gị Photo Library, Igwefoto Roll ma ọ bụ Photo Stream.
All atụmatụ ndị a na ndị ọzọ na-enye mfe ngwọta na-mbipụta na ndị mmadụ na mkpesa banyere na kwa ụbọchị n'ihi ya ekwe ka ị na-ebi ndụ ndụ gị nchegbu free.
Wondershare TunesGo ewe uru nke nnukwu ihuenyo mkpebi na-nyere site gị PC, na-eme ị na-enwe onye ọrụ interface N'ihi ya na-eme ọrụ nke ga-emeela ị awa ole na ole sekọnd.
Video Tutorial: otú nyefee iPhone Photo n'ọbá akwụkwọ na kọmputa
Nyefee iPhone Igwefoto Roll ka Computer
Nyefee iPhone Music ka Computer
Nyefee iPhone SMS ka Computer
Nyefee iPhone Ndi ana-akpo ka Computer
4 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPhone
Ebee iPhone ndabere ebe
Nyefee iPhone ngwa iTunes
iPhone ndabere extractor naghachi iPhone data
1 Pịa Gbanwee iPhone ka Android
1 Pịa Gbanwee Android ka iPhone
A Full Guide ka mmekọrịta iPhone ka Car
A Full Guide ka mmekọrịta iPhone ka iCloud
> Resource> iPhone> otú nyefee Photo Library si iPhone ka Computer